Madaxweynaha Puntland oo ka hadlay shirka Madasha ee ka furmaya Muqdisho * Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
By A warsame	 On Dec 16, 2016
December 16 (mareeg)— Madaxweynaha Puntland C/wali Maxamed Cali Gaas oo shalay gelinkii dambe soo gaaray magaalada Muqdisho ayaa ka hadlay shirka Madasha ee ka furmaya Muqdisho.
C/wali Gaas ayaa sheegay in shirka Madasha oo socon doona labo maalin looga hadlayo gaba gabeynta howlaha doorashada sanadka 2016.
“Shirka Madasha waxaa uu soconayaa labo maalin, waxaa looga hadlayaa gaba gabeynta doorashada 2016, iyo wixii kaloo harsan”ayuu yiri C/wali Gaas.
Madaxweynaha Puntland ayaa sheegay in dalka uu u baahan yahay is bedel inuu ka dhaco, si loo helo Dowlad shaqeysa dadka iyo dalka.
Shirka Madasha oo lagu waday inuu furmo 13-ka bishan ayaa arrimo farsamo u baaqday, waxaana waxyaabaha ugu muhiimsan oo looga hadlayo shirkan uu yahay arrinta xubnaha Aqalka sare ee Gobolada waqooyi oo muran uu ka taagan yahay.
Waxaa lagu wadaa in Xildhibaanada Baarlamaanka la dhaariyo ka hor maalinta Axada, iyadoo Madaxda Madasha ay goob joog ka noqon doonaan.
Shirkii Madasha Wada-tashiga ee todobaadkii hore ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa laga soo saaray waqtiga ay dhacayaan doorashada Madaxweynaha iyo Guddoonka Baarlamaanka, iyadoo uu dib u dhac ku yimid waqtigii loo asteeyay in lagu dhaariyo Xildhibaanada labada Aqal.